ဘယ်သူ လာဖမ်းဖမ်း CDM ဆက်လုပ် ကြပါ (သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေး) – Let Pan Daily
ဘယ်သူ လာဖမ်းဖမ်း CDM ဆက်လုပ် ကြပါ (သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေး)
ဘယ်သူလာဖမ်းဖမ်း CDM ဆက်လုပ်ကြဖို့ သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးက သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကတဆင့် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မနေ့ညက သရုပ်ဆောင် လူမင်း ဖမ်းခံရပြီးနောက် သူတို့လည်း အချိန်မရွေးဖမ်း ခံရနိုင်တယ် ဆိုပြီး ဒီနေ့ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်နေသူအတွက် ထောပတ်ထမင်း ဝေငှဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံနဲ့အတူ ရေးသားလိုက်တာပါ။ သူရေးထားတာကတော့ “ဦးလူမင်း ပါသွား ပါပြီ… ဖွေးတို့လဲအချိန်မရွေး ပါနိုင်ပါတယ်.. ဘယ်သူလာဖမ်းဖမ်း CDM ဆက်လုပ်ကြပါ ! တကယ် ထိရောက်ပါတယ်
ရုံးမတက်ကြပါနဲ့တော့ !!!! အသက်ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေးတွေ လူကြီးတွေ အတွက်လဲ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ မျက်ရည်ကျရတယ် … ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီတခါ အမှန်တရား ကို အမှားတရားက နိုင်လို့မရဘူး… စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးပါစေ ! မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်နိုင် နိုးထနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ လက်ထဲ အမြန်ပြန်ရောက်ပါစေ! ကြောက်ခေတ်ကိုပြန်မသွားကြေး!
ယနေ့ အလှူ ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း ၁၄၄ ပွဲ! I hope that People don’t react and can get some help from international.. Once people react with violence, military can announce the detainment and will Get worse… အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်!!!!!! အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒ ဆက်ပြမယ့် လူများ, CDM ဝန်ထမ်းများကိုလေးစားလျက် ….
ဘယ္သူလာဖမ္းဖမ္း CDM ဆက္လုပ္ၾကဖို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဖြးေဖြးက သူ႔ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကတဆင့္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ မေန႔ညက သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္း ဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ သူတို႔လည္း အခ်ိန္မေ႐ြးဖမ္း ခံရႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး ဒီေန႔ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ေနသူအတြက္ ေထာပတ္ထမင္း ေဝငွဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ပုံနဲ႔အတူ ေရးသားလိုက္တာပါ။ သူေရးထားတာကေတာ့ “ဦးလူမင္း ပါသြား ပါၿပီ… ေဖြးတို႔လဲအခ်ိန္မေ႐ြး ပါႏိုင္ပါတယ္.. ဘယ္သူလာဖမ္းဖမ္း CDM ဆက္လုပ္ၾကပါ ! တကယ္ ထိေရာက္ပါတယ္
႐ုံးမတက္ၾကပါနဲ႔ေတာ့ !!!! အသက္ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ လူငယ္ေလးေတြ လူႀကီးေတြ အတြက္လဲ ႀကိတ္မႏိုင္ခဲမရ မ်က္ရည္က်ရတယ္ … ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီတခါ အမွန္တရား ကို အမွားတရားက ႏိုင္လို႔မရဘူး… စစ္အာဏာရွင္က်ဆုံးပါေစ ! ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အိပ္ႏိုင္ ႏိုးထႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ လက္ထဲ အျမန္ျပန္ေရာက္ပါေစ! ေၾကာက္ေခတ္ကိုျပန္မသြားေၾကး!
ယေန႔ အလႉ ေထာပတ္ထမင္းနဲ႔ ၾကက္သားဟင္း ၁၄၄ ပြဲ! I hope that People don’t react and can get some help from international.. Once people react with violence, military can announce the detainment and will Get worse… အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္!!!!!! အၾကမ္းမဖက္ ဆႏၵ ဆက္ျပမယ့္ လူမ်ား, CDM ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေလးစားလ်က္ ….
ပုရိသတွေ ရင်ဖို စေမယ့် နန်းအမရာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒိယို
ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် ငယ်ရွယ်နုပျိုနေပြီး ကျော့ရှင်းတဲ့ အလှတရားတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အကြည့်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ မိုးဟေကို